VAIA1500 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၁၅၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VAIA 1500
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAIA1500
How to have purified water that meets the usage standards? 1500LPH VAIA1500 Purified Water Filtration System will help you to solve this problem.
စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ ညီအောင် ရေကို ဘယ်လိုသန့်စင်မလဲ? ဒီပြသနာကို 1500LPH VAIA1500 ရေစစ်က ဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်။
With the application of RO water filtration technology - the most advanced water purification technology in the United States, 1500LPH VAIA1500 Purified Water Filtration System uses autovan stainless steel filter column that will surely satisfy all customers at home and abroad.
US ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံးသော ရေသန့်စင်ခြင်း နည်းပညာဖြစ်တဲ့ RO ရေစစ် နည်းပညာနဲ့အတူ 1500LPH VAIA1500 ရေစစ်က ပြည်တွင်း ပြည်ပက ဝယ်ယူသူတွေကို စိတ်ကျေနပ်စေဖို့ အော်တိုစတိန်းလက်စ်စတီး ရေစစ်ကော်လံကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
Products are imported and distributed by Viet An General Trading Joint Stock Company directly in branches in Hanoi - Ho Chi Minh - Hue - Da Nang - Buon Ma Thuot, and also exported to other countries. ASEAN. If you want to ownahigh-quality, high-durability pure water filtration device, you should not ignore the information introduced about 1500LPH VAIA1500 Purified Water Filtration System in this article.
Viet An မှ ထုတ်လုပ်သော ပစ္စည်းတွေကို အခြားအာဆီယံနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့သလို နိုင်ငံတွင်းမှာ ဆိုရင်လည်း Hanoi - Ho Chi Minh - Hue - Da Nang - Buon Ma Thuot တို့မှာ ရှိတဲ့ ရုံးခွဲတွေမှာ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်က အရည်အသွေးပြည့်မီပြီး ကြာရှည်ခံတဲ့ ရေစစ်ကို ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင် အောက်က ဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ 1500LPH VAIA1500 ရေစစ်အကြောင်းကို သေချာဖတ်ရှုသင့်ပါတယ်။
Why should you use 1500LPH VAIA1500 Purified Water Filtration System by Viet An
Viet An မှ 1500LPH VAIA1500 ရေစစ်ကို ဘာကြောင့် အသုံးပြုသင့်တာလဲ
Model VAIA1500 is the water filter product line applying the most modern filtration technology of the United States. Produced by modern technology lines with the most stringent ISO 9001:2015 quality monitoring process today. Withaspecial design including stainless steel filter columns containing filter materials, automatic valve system, genuine RO membrane system capable of removing all impurities, toxins, virust, bacteria from the water to for the finished water is purified water, beneficial for human health.
VAIA1500 ရေစစ်က US ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး စစ်ထုတ်စနစ်နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ISO 9001:2015 စံနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ခေတ်မီ နည်းပညာ လိုင်းတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ရေစစ်ပစ္စည်းများ၊ အော်တိုအဆို့များ ပါဝင်သော စတိန်းလက်စ်စတီး ရေစစ်ကော်လံတွေ၊ စစ်မှန်သော RO အလွှာပါးစနစ်တွေကြောင့် အညစ်အကြေး၊ အဆိပ်အတောက်၊ ဗိုင်းရပ်စ်၊ ဘက်တီးရီးယားတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး စစ်ထုတ်ထားတဲ့ရေတွေကို လုံးဝသန့်စင်စေပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စေပါတယ်။
Components mainly constituting 1500LPH VAIA1500 Purified Water Filtration USystem are imported from advanced countries such as the US, UK, Netherlands, and the Netherlands ... with high durability.
1500LPH VAIA1500 ရေစစ်မှာ ပါဝင်တဲ့ အဓိက အစိတ်အပိုင်းတွေကို US UK နယ်သာလန် စတဲ့ ခေတ်မီတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေမှ တင်သွင်းထားပြီး ကြာရှည်ခံပါတယ်။
Automatic, self-contained water filtration process without human participation, so water quality always meets food hygiene and safety standards.
အော်တိုလုပ်ဆောင်ပြီး လူမပါဘဲ ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်တာကြောင့် ရေရဲ့အရည်အသွေးက စံချိန်မီပါတယ်။
Rated as the smartest water filtration system with the control system automatically disconnects when something goes wrong, automatically filters the water when connected toapower source andawater source.
ရေအရင်းအမြစ်နဲ့ ပါဝါအရင်းအမြစ် ဆက်သွယ်နေစဉ် အကြောင်းတစုံတရာ ပေါ်ပေါက်ပါက ထိန်းချုပ်ဘောင်မှ ချက်ချင်းရပ်ပေးသည်။
Water after being treated through the system can be drunk directly without using any additional methods.
စစ်ထုတ်ပြီးသားရေကို အခြားနည်းတွေ သုံးစရာမလိုဘဲ သောက်သုံးလို့ ရပါပြီ။
Super fast water filtration speed, super saving, only about 1 hour the system can filter 1500 liters of pure water.
စူပါလျင်မြန်သော ရေစစ်နှုန်း၊ စူပါ ချွေတာခြင်း၊ တစ်နာရီမှာ ၁၅၀၀ လီတာ စစ်ထုတ်နိုင်သည်
The water filtration process is always stable, less maintenance and less maintenance.
ရေစစ်ထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်က တည်ငြိမ်ပြီး ထိန်းသိမ်းမှု အများကြီးမလိုပါဘူး။
The product is suitable for running water treatment, bottled pure water, bottled in production and business establishments, purified water in homes, schools, hospitals, apartment buildings.
ဒီစက်က ရေသန့်ဘူး ထုတ်လုပ်သော လုပ်ငန်း၊ အိမ်၊ကျောင်း၊ဆေးရုံ၊တိုက်ခန်းတွေမှာ ရေသန့်ထုတ်လုပ်ဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။
1500LPH VAIA1500 Purified Water Filtration System is more than 15 years old
1500LPH VAIA1500 ရေစစ်က ၁၅ နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိ ခံပါတယ်။
Specifications of 1500LPH VAIA1500 Purified Water Filtration System
1500LPH VAIA1500 ရေစစ်၏ ဖော်ပြချက်များ
Product's name: 1500LPH VAIA1500 Purified Water Filtration System
Capacity: 1500 liters / h
Size: 5x0.6x1.8 m
Power consumption: 2.24 Kw / h
ပစ္စည်းအမည်-1500LPH VAIA1500 ရေစစ်
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း-တစ်နာရီလျှင် ၁၅၀၀ လီတာ
ပါဝါစားခြင်း-တစ်နာရီတွင် ၂.၂၄ ကီလိုဝပ်
The difference of the VAIA1500 VAIA1500 RO water filtration system of Viet An with other conventional filtration products
VAIA1500 ရေစစ်နှင့် အခြားရေစစ်များ၏ ကွာခြားချက်
+ Outstanding quality, specialized water purification equipment for export
တင်သွင်းရန် ထူးချွန်သော အရည်အသွေး
+ Ability to filter purified water quickly, ensuring standards QCVN 6-1:2010/BYT of the Ministry of Health
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ QCVN 6-1:2010/BYT စည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ရေကို လျင်မြန်စွာ စစ်ထုတ်နိုင်ခြင်း
+ Applying the latest RO water purification technology in 2018 with the ability to almost completely remove impurities, toxins, bacteria, virust ... and in the water to create finished water with hygienic standards. In addition, the system also hasamineral supplement to retain the beneficial minerals needed by the body, so the quality of water after being filtered through the system is always easy to drink, sweet and sweet. and has many health benefits
၂၀၁ ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာကို အသုံးပြုထားခြင်း၊ ရေမှ အညစ်အကြေး၊ဗိုင်းရပ်စ်၊ အဆိပ်အတောက်များ အားလုံးနီးပါးကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးစံနှုန်းတွေနဲ့ ညီစေပါတယ်။ ထို့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ ချန်ထားပေးတာကြောင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စေပါတယ်။
+ Long use time up to 15 years. During the process of using less maintenance, warranty saves investment costs in production and business
၁၅ နှစ်ထိ ခံပါတယ်။ လုပ်ဆောင်မှုအတွင်း ထိန်းသိမ်းစရာသိပ်မလိုပါဘူး။ အာမခံချက်က ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်ကို ချွေတာနိုင်ပါတယ်။
+ Long warranty time up to 12 months, product lifetime maintenance
၁၂ လအာမခံချက်နှင့် တသက်တာ ထိန်းသိမ်းပေးမှု
Accompanying accessories 1500LPH VAIA1500 Purified Water Filtration System of VietAn
ပါဝင်သော အဆင်တန်ဆာများ Viet An မှ 1500LPH VAIA 1500 ရေစစ်
For customers wishing to buy 1500LPH VAIA1500 Purified Water Filtration System to openabusiness of bottled and bottled water, they should invest in an automatic filling and filling system withacapacity of 90 bottles / hour (20 liters / bottle). Filling machines are made from high-grade stainless steel, have high durability. The price of this bottle extraction machine only fluctuates over 100 million VND. In addition, you also need to invest in buyingasemi-automatic bottle shrinking machine withacapacity of 150-200 bottles / hour, 250-350 bottles / hour. The machine is used to shrink the bottle nozzle, bottle neck, bottle cap and bottle body, with many different temperature modes to adjust to the needs of the user. Extraction machines are produced at factories of Viet An or imported from Italy, Japan, Germany ... according to your order.
ဒီစက်ကို ရေဘူးထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းအတွက် ဝယ်ယူချင်တဲ့ သူတွေအနေနဲ့ တစ်နာရီမှာ ၂၀ လီတာဘူး ၉၀ ဖြည့်နိုင်တဲ့ အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ စက်ကို ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။ ဘူးထုတ်တဲ့ စက်က ဗီယက်နမ်ငွေ သန်း ၁၀၀ ကျော်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တစ်နာရီမှာ ၁၅၀-၂၀၀၊ ၂၅၀-၃၅၀ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ တစ်ဝက်အော်တို ဘုးရှုံ့တဲ့စက်လည်း ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။ ဒီစက်က အသုံးပြုသူ လိုချင်တဲ့ အပူချိန်နဲ့ ဘူးနှုတ်ခမ်း၊ လည်ပင်း၊ အဖုံး၊ ကိုယ်ထည်ကို ရှုံ့ပေးပါတယ်။ ထုတ်တဲ့ စက်တွေကို Viet An မှ ထုတ်လုပ်သလို သင့်ရဲ့အော်ဒါအတိုင်း အီတလီ ဂျပန် ဂျာမနီတို့မှလည်း တင်သွင်းပါတယ်။
As for customers who buy the system just to filter the water to serve the needs of the family and factory, there is no need to invest in the above equipment.
မိသားစုသုံး ရေစစ်ပဲ ဝယ်ယူသူတွေအတွက်တော့ အပေါ်က ပစ္စည်းတွေ ဝယ်ယူစရာ မလိုပါဘူး။
Note when using 1500LPH VAIA1500 Purified Water Filtration System by Viet An
Viet An မှ 1500LPH VAIA1500 ရေစစ်ကို အသုံးပြုသည့်အခါ သိသင့်သည်များ
This isaproduct line designed specifically for water filtration thanks to the filter material system, filter membrane. So afteraperiod of water filtration, it is necessary to replace the filter materials, filters and filters to ensure the output water quality always meets the quality standards.
ရေစစ်ပစ္စည်း၊ ရေစစ်အလွှာတွေကြောင့် လိုင်းကို စပါယ်ရှယ် ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ ရေစစ်ပြီးတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာ ရေစစ်ပစ္စည်းတွေ ရေစစ်တွေကို အစားထိုးပြီး ရေရဲ့ အရည်အသွေးက စံချိန်မီကြောင်း သေချာအောင် လုပ်ရပါမယ်။
All components, water filtration materials, Viet An water filters are provided and have preferential policies for customers who have used Viet An's water purification lines. For more information, please contact Viet An at the nearest branch.
ရေစစ်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို Viet An မှ ရေသန့်စင်လိုင်း ဝယ်ယူထားသူတွေအတွက် ပေါ်လစီအနေနဲ့ ပေးပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိဖို့ အနီးဆုံး ရုံးခွဲကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
VAQGF100 AUTOMATIC BOTTLE FILLING 3-IN-1 MACHINE
ကုနျထုတျနိုငျအား : ၂၀လီတာဘူး ၁၀၀/၁နာရီ
စံနှုနျး: ISO 9001:2015
18 RO membrane RO အလွှာပါး4unit Hitech-USA/CSM Korea
27 20” stainless steel filter housing စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ်2unit VA/ USApec
28 Bacterial filter Cartridge ဘက်တီးရီးယားစစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့်2unit VA/ USApec
Hỏi đáp & đánh giá 1500LPH VAIA1500 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်